Trump oo markale weeraray Ilhaan Cumar maalmo kadib markii – Axadle
Madaxweyne Donald Trump oo isku soo bax uu ku qabtay degmada Middletown ee dalkaasi ayaa weerar afkaa ku qaaday Ilhan Omar xubnaha xisbigiisa ku matalada Mila Minasoota “Ilhan Omar taasi waa mid weyn, iyadu waa weyn tahay, marwalba way cabaneysaa, marwalba way cabaneysaa,” asaga oo raaciyay: “Halkaan baa la yimid, wax walbana waxaa qabatay iyada, sidee bay ku timid halkan? Qofna ma garanayaa sida ay halkan ku timid?
Tani waxa ay ahayd markii labaad ee Ilhaan uu weerar ku qaado toddobaadkan. Isku soo bax Moon Township ka dhacay Talaadadii, Sebtember 22, ayuu ka yiri Taraam, “Waxay noo sheegaysaa sida waddankeenna loo maamulo! Sidee ku sameysay meeshii aad ka timid? Waa sidee wadankiinu? ”
Si kastaba ha noqotee, markii muuqaalka 74-jirka uu ka soo muuqday Twitter-ka, Ilhaan Cumar ayaa ka fal celceliyay iyadoo leh:” Marka hore, kani waa waddankaygii oo waxaan ahay xubin ka tirsan Golaha Tan labaad, waxaan ka soo cararay dagaal sokeeye markii aan jiray 8 sano ma maamulo wadan inkasta oo aad dalkeena u maamusho sida mid. ” Kadib waxay qoraal ku tiri, “isu soo baxyadan cibaadada u eg waxay iiga tagayaan anigoo yaaban hal shay: Maxaad aad ugu mashquushay aniga?” Ilhaan ayaa sidoo kale taageero ka helay dad badan oo hadalka Trump ku tilmaamay “cunsuriyad”.
37 jirkan ayaa u dhalatay Soomaaliya, waxa ayna ka tagtay bariga Africa iyada oo yar, waxa ayna heysataa dhalashada Mareykanka 20-kii sano ee la soo dhaafay.
Waxay dhowaan qortay qoraal lagu daabacay Washington Post, oo cinwaankeedu yahay: “Haddii Dimuqraadiyiintu ay doonayaan in ay guuleystaan, diiradda saara dadka aan codeyn”. Bilaabista maqaalkeeda, waxa ay weerartay Trump waxayna qortay, “Madaxweyne Trump ayaa mar labaad aniga daba socday toddobaadkan: ‘Ka waran?’ Wuxuu ka yiri isu soo bax ka dhacay Pennsylvania. ‘Waxaan ku guuleysaneynaa gobolka Minnesota iyada dartii.’ Kadib wuxuu u bilaabay naceyb, weerar been ah oo tilmaamaya inaanan Mareykan aheyn. ‘Waxay noo sheegaysaa sida dalkeena loo maamulo. Sidee ku sameysay meeshii aad ka timid? ’Ayuu weydiiyay dadkii badnaa. (Diiwaanka, waxaan ka soo cararay dagaal sokeeye markii aan ahaa 8 sano jir waxaan ahay muwaadin Mareykan ah oo u adeega qarankeena Koongaraska.)
Waa Kuma Xiddiga Mustaqbalka Weyn Ku Lahaa Liverpool Ee